ရေသူမလေး လို ရေကူးကန် ထဲမှာ အမိုက်စား ရေကူးနေ တဲ့ ချီချီလေး ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ရေသူမလေး လို ရေကူးကန် ထဲမှာ အမိုက်စား ရေကူးနေ တဲ့ ချီချီလေး ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
ရေသူမလေး လို ရေကူးကန် ထဲမှာ အမိုက်စား ရေကူးနေ တဲ့ ချီချီလေး ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး
နိုင် ငံ ကျော် Beauty Blogger တစ် ယောက် ဖြစ် တဲ့ နေခြည်ဦး က တော့ ဘယ် လို အခြေအနေ တွေ ဖြစ်ပါစေ သူမ ဘဝ ကို သူမ စိတ် ကြိုက် ဖန် တီး ယူ နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် ကြီး လည်း နေခြည်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို သဘေ ာကျ ကြမယ် ထင်ပါ တယ် ။ သူမက လက်ရှိမှာလဲ ၀ါသနာပါရာ အနုပညာ အလုပ်ကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် … .
နေခြည်ဦး က တော့ သူမ ရဲ့ ဘဝကို အရိုးရှင်းဆုံး နဲ့ အကောင်း ဆုံး ဖြတ်သန်း နေပြီး လူငယ် တစ်ယောက်ပီပီ လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ နေတတ် သူ တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတ ယ် ။ နေခြည်ဦး က တက်သစ်စ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် အဖြစ် အနုပညာ လောက မှာ ကြိုးစား နေသလို သူမရဲ့ Beauty bynaychi ကုမ္ပဏီကြီး ကိုလည်း ဦး ဆောင် နေတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး ငယ်လေး တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် … .
Previous post အတွင်းခံ မ၀တ်ထားပဲ တက်တူး ထိုးရင်း ပိုစ့်ပေးကြမ်းနေတဲ့ မျက်ဝန်း ရဲ့ အကြမ်းစား ပုံများ
Next post ကကွက်ဆန်းလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ခပ်ကြမ် းကြမ်းလေး လှုပ်ပြလိုက် ပြန် တဲ့ ပုရိသ တို့ရဲ့ အသဲစွဲ ခေးကြီးလု ရဲ့ ဗီဒီယို